विद्यालयबाट टुसाउँदै चिनियाँ भाषा
चिनियाँ महिला शिक्षकले चीनमा अक्षर कसरी लेखिन्छ भनेर निगालाले लेख्दै गरेको चित्र देखाइन् । अनि अक्षर लेख्ने तरिका पनि सिकाइन् । नेपाली भाषा बायाँबाट दायाँ लेखेजस्तै चिनियाँ अक्षर दायाँबाट बायाँ अनि माथिबाट तल लेखिँदो रहेछ ।
विश्वका बस्न लायक सहरहरू
विश्वमा सयौं सहरहरू छन् । तर ती सबै सहररू के साँच्चिकै बस्नलायक छन् ? कि मानिसहरू जेनतेन जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् ? बस्नलायकका दृष्टिकोणले विश्वका उत्कृष्ट सहरहरू कुन–कुन हुन् ?
बजारको बाढीले हाम्रो गीतका रूखलाई बगाउन थालेको धेरै भयो । पुँजीवादले जरा लगातार उखेलेपछि संगीतले जमिनसँगको साइनो भुल्नु अनौठो प्रसंग रहेन अब ।
देशमा राणा शासन ढल्यो । पञ्चायत आयो, त्यो पनि गयो । राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । र लोकतन्त्र पनि । तर नेपाली खेलकुदले अहिलेसम्म प्रजातन्त्र महसुस गर्न पाएको छैन,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले तीन वर्षअघि संसद्को लेखा समितिमा भनेका थिए ।
‘किलर रोबोट’ को चिन्ता
सबैभन्दा धेरै आणविक शक्ति भएको मुलुक अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि धेरैको चासोको विषय थियो— उत्तर कोरियासँग अमेरिकी सम्बन्ध ।
यसपालि यस्तै भयो
गाउँ छोडेर अलि टाढा बस्न थालेपछि मैले गाउँलाई अलि नजिकबाट चिनेको थिएँ । घर छोडेर अलि टाढा काठमाडौं आएपछि बुवालाई अलि नजिकबाट चिनेको थिएँ ।
पर्दाअगाडि र पछाडि
रुचि, पेसा र परिवार । तीन थोककै लागि समयको सन्तुलन सजिलो छ ? जो–जोसँग सकिँदैन, अप्ठ्यारो–असहज भन्ने जवाफ छ, उनीहरूले ‘पशुपतिप्रसाद’ चलचित्रमा ‘मितबा’ पात्रको अभिनय गर्ने प्रकाश घिमिरेलाई भेट्दा हुन्छ । उनको घर पुगे हुन्छ ।
एकै छिनअघिसम्म उनी हामीभन्दा पछाडि थिए । उनले हामीलाई उछिनेको हामीलाई नै थाहा थिएन । उनले उछिनेकै भए त्यति सानो गोरेटोमा हामीलाई थाहा नहुने कुरा पनि थिएन ।
मुग्लानको ‘निको नहुने घाउ’
भुकम्पले छिन्नभिन्न बनेको घरछेउको टहरामा एक व्यक्ति अचेत अवस्थामा पल्टिरहेका छन् । उनकी आमा घरी छोराको र्‍याल पुछिदिन्छिन् त, घरी दिसा–पिसाब सोहोर्छिन् ।